Ivesi le-AT & T elithandekayo | Martech Zone
Sengivele ngiyikhasimende lakho. Nginocingo lwasekhaya ne-DSL ngawe (ngaphambili i-SBC). Ngiyayithanda insiza kepha ngifisa ukuthuthukisa i-DSL futhi ngisebenzise insizakalo enhle ye-TV onayo. Uyabona, ifulethi lami linikeza kuphela iphakethe eliyisisekelo futhi ngingathanda ukulithuthukisa.
Kule minyaka embalwa edlule, uthumele ezinye iheha iposi eliqondile ngendlela emangalisayo ngicela ukuthi ngithuthukise. Ngibathola cishe kanye ngenyanga bebhekiswe kahle efulethini lami. Ngenyanga eyodwa uze wathumela incwadi enemibala ephelele echaza wonke amaphakheji we-DSL neThelevishini. Ungitholile… ngithengisiwe! Ngidinga ukukhuphukela ku-U-Verse ukubona amaColts ephumelela ngeSonto kuyo yonke inkazimulo yawo.
Yilokhu ongikhombisa khona… futhi yebo, ngilungele!
Ngakho-ke, ngiyavakasha I-AT & T.com bese uchofoza inkinobho yokuthuthukisa manje. Doh! Okokuqala kufanele ngibheke ukutholakala. Ngiyazi ukuthi iyatholakala, ngoba umakhelwane wami ku- # 1324 ubesebenze isikhathi esingaphezu konyaka (waphuma). Lokho kusendabeni yesithathu… ngisendabeni yesibili. Ngakho-ke, ngihambisa ikheli lami nenombolo yocingo…
Umbuzo wami wokuqala, i-AT & T ethandekayo, kungani ungathumela izikhangiso ekhelini lami ngonyaka odlule ucela ukuthi ngithuthukise isevisi yakho uma ingekho ngempela (engikwaziyo ukuthi akulona iqiniso). Uchithe imali impela kulokhu kutholakala njalo kweposi eqondile. …
Kulungile… nginquma ukuthatha omunye umzila. Ngichofoza ku-Chat Online Manje service ekhasini lakho. Ngimi kulayini namakhasimende ayi-15 alindile. Ngicabanga ukuthi ungalahla ifayili le- Manje. Ngichofoze ngivale iwindi futhi nginqume ukushaya ucingo esikhundleni salokho. Ngichofoza Xhumana Nathi… ngiyabonga ukuthi unezinombolo zocingo ezitholakalayo.
Ucingo luphendula ngezwi elizenzakalelayo bese licela ukuthi ngifake inombolo yami yocingo ye-akhawunti. Ngiyavuma. Bese ingibuza ukuthi ngithanda ukwenzani, ngithi ngokucophelela “Get U-Verse” ngicabanga ukuthi “U-Verse” umsindo omuhle kakhulu ongabamba. Cha hamba… “Ngiyaxolisa, angisizwisisi isicelo sakho.” Manje sengikhungatheka kancane. “Thuthukela ku-U-Verse”… okusebenzayo.
Uhlelo lungitshela ukuthi angikwazi ukuthuthuka, ngikweleta uhlobo oluthile lokulinganisa emuva. Ngakho-ke, ngiyikhokha ngocingo ngekhadi lesikweletu ngokuthayipha kuzo zonke izinombolo zami. Ngifuna ukwazi ukuthi kungani ungangitshelanga lokhu ekhasini lewebhu lapho ngingene khona ngemvume futhi ngacela insiza.
Noma kunjalo, ngixhunywe nommeli, uShannah, futhi muhle kakhulu. Sinezingxoxo ezincane mayelana namaColts ashaya abaNgcwele kule mpelasonto. Ungitshela ukuthi umyeni wakhe ungumlandeli wamaBhele. Ngiyabuza, "Basekhona ku-NFL?". Wathola insini kulokho. Ungitshela ukuthi uhlelo lwakhe luthi alutholakali futhi. Ngiyamtshela ukuthi umakhelwane wami ubenayo futhi ubuza ikheli labo. Kumele ngiphume efulethini, ngikhuphuke izitebhisi, ngithole inombolo. Ngibuyele emuva ngiye phansi ngiyomtshela # 1324.
Uyaqhubeka futhi ucabanga ukuthi uthuthuka. Ngijabule kakhulu. Bese kuhoxiswa ucingo.
Akekho ongabuyela emuva… Ngicabanga ukuthi uhlelo aluzange lulandelele inombolo yami futhi anginayo indlela yokubamba iShanna manje ukuqhubeka nokulandela. Ngizamile ukudayela ku-opharetha okwesibili kepha manje sekukhona ukulinda futhi.
Ngakho… ngivakashela iwebhusayithi futhi futhi nginqume ukubhala i-imeyili. Ngichofoza Xhumana nathi ezansi kwekhasi bese uthayipha “Thuthukela ku-U-Verse” emkhakheni otholakalayo. Ngichofoza ukuhambisa nokulayishwa kabusha kwekhasi ngezinketho ezimbalwa ze-imeyili ngezansi. Ngichofoza inketho yokuqala ye-imeyili… futhi esikhundleni sekheli le-imeyili noma ifomu, ngivezwa ngesixhumanisi esibuyela kuwebhusayithi ye-U-Verse. Yileso sayithi ebengivele ngikuso.
Kungenza ngibe nelukuluku lokuthi ngabe uke wahlola umsebenzisi ngesiza sakho ukuthola ukuthi kungaba lula noma kube nzima kangakanani kumakhasimende akho ukusebenzisa izinsizakalo zakho eziku-inthanethi. Ngiyazibuza ukuthi mangaki amakhulu noma izinkulungwane zamanye amakhasimende azimisele ukukhokha ngaphezulu futhi abe ngamakhasimende abaluleke kakhulu enhlanganweni yakho - kepha angikwazi.
Lapho unayo, i-AT & T. Ngiyikhasimende elijabule (phambilini) elifisa ukuthuthukisa i-akhawunti yalo. Ngikhokhile izikweletu zami, nginemali, futhi ubukhangisa kimi ukuthi ngikwenze iminyaka embalwa. Ufuna ngempela ukuthi ngithuthukise, akunjalo? Uma wenza kanjalo, iwebhusayithi yakho ayithuthukisiwe, ingxoxo yakho eku-inthanethi ayihambisani, uhlelo lwakho alunembile, futhi uhlelo lwakho lwefoni (ngokuxakile) kungenzeka ukuthi luye lwangilahla ucingo lwami.
Ngikulungele uma ulapho.
Ngokusobala, akusikho namuhla.
Tags: ukuyothenga amaholidehtaccess iqondise kabushaukuhlolwa kwe-multivariateukucutshungulwa kwezilimi zemvelostrip ifoldaVouchfor!WordPress
Ngibe nokuhlangenwe nakho okufanayo ne-u-verse. Kuyamangalisa. Ngifuna kubi KAKHULU. Ngithole ama-imeyili ngisho nezingcingo ezidayisa ngocingo ngakho. Isevisi ayitholakali endaweni yethu. Sekukonke, angikaze ngiyibone inkampani imbi kangaka ekusebenzeleni amakhasimende abo.
Ngo-Apr 30, i-2011 ku-6: i-27 PM
Lokho kuzwakala impela njengokuhlupheka. Wake wagcina ukuthola ukuvuselelwa obukufuna? Ngokwami, ngincamela ukunamathela kwinsizakalo yami ye-DISH Network. Sengibhalisile isikhathi eside futhi muva nje ngibe yisisebenzi nami. I-DISH isineziteshi eziningi ze-HD kunanoma ngubani omunye embonini kanye namadili amahle njenge-HD mahhala impilo yonke. Futhi kunezinye izinto okufanele ucabange ngazo futhi, ngokwesibonelo ukuthembeka. Lapho uthola zonke izinsizakalo zakho zokuzijabulisa / zokuxhumana kusuka kumthombo owodwa, uma eyodwa iphelile, zonke ziyakwenza. Okungenani uma enye yezinsizakalo zami ihlangabezana ne-hiccup ngisengakwazi ukujabulela ezinye.